Tsipy kanetibe-Racle: «Tsy asian’ny olona lanjany ny pointeur» | NewsMada
Tsipy kanetibe-Racle: «Tsy asian’ny olona lanjany ny pointeur»
Nanambara ny fiainany amin’ny maha mpilalao tsiny kanetibe matihanina azy, tao amin’ny tambajotran-tserasera Andriantseheno Christian (Racle), tompondaka eran-tany, ny taona 1999.
“Pointeur” nandrombaka ny ho tompondaka eran-tany, tsipy kanetibe, ny taona 1999 Andraintseheno Christian (Racle). Fihaonana notanterahina tatsy La Réunion, niarahany tamin’i Jean Jacky sy i Kailas. Tsy nanafina ny tovolahy fa tsy asian’ny olona lanjany loatra ny “pointeur” fa matetika any amin’ny mpitifitra na ny “tireur” hatrany ny mason’ny rehetra. “Miankina betsaka amin’ny fahaizan’ny “pointeur” anefa ny mahatsara ny lalaon’ny ekipa”, hoy izy.
Nisedra izay olana izay ny tenany, nandritra ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, natao tany Grenoble, ny taona 2006. Nosoloina izy, nandritra ny lalao ampahefa-dalana nikatrohana tamin’i Belzika. “Tsy nilalao tsara ny “milieu” dia izaho “pointeur” no nesorina ka nosoloina ny mpilalao fahefatra”, hoy i Racle.
Nampitomany azy ny zava-nisy taorian’ny fahavitan’ny lalao satria nahatohina ny fony. Na izany aza, io taona io no nahatonga azy hijanona tany Frantsa, ary nahazoany ny zom-pirenena frantsay.
Tsy nanafina i Racle fa tsy nampiova ny fiainany loatra ny nahazoany ny tompondaka eran-tany, ny taona 1999, saingy kosa nanokatra varavarana hafa ho azy, toy ny nahafahany nampianatra fanatanjahantena tamin’ny sekoly katolika iray, nialoha ny nandehanany tany Frantsa.
Nambaran’i Racle fa nampidina ny lanjan’ny tsipy kanetibe malagasy, tato ho ato, ny fiovan’ny toetry ny kianja amin’izao fotoana izao. Na izany aza, tsy nanafina izy fa manan-tanana amin’ny tifitra avokoa ireo mpilalao amin’izao fotoana izao.
Nasian’ny resaka ihany koa ny fahitan’ny tsipy kanetibe malagasy, ankehitriny. Mbola afaka handrombaka “Mondial” iray ny Malagasy raha samy manao ny asany avy ny tsirairay ka tsy mifampitsabaka andraikitra.